पोल्टावा - great city to study medicine in Ukraine and Europe
पोल्टावा युक्रेन शहर र पोल्टावा क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र हो. यो हाम्रो देश को उत्तर-पूर्व मा स्थित छ, को Pridneprovskaya lowland र नदी Vorskla को बैंक मा निहित. को XII शताब्दीमा मिति शहर बारे पहिलो वृत्तचित्र रेकर्ड. 27-औं देखि, फेब्रुअरी 3-D सम्म, जुन 1925 यो पोल्टावा प्रान्तको प्रशासनिक केन्द्र थियो. शहर यसको आफ्नै प्रतीक र झण्डा छ. पोल्टावा एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र र एक ठूलो परिवहन nodal विन्दु हो. शहर वर्ग हो 104.42 km² र यो विभाजन गरिएको छ3मुख्य जिल्लामा (Oktyabrskiy, Kievskiy र Leninskiy). शहरको जनसंख्या लगभग छ 300,5 हजार मान्छे. स्थानीय सरकारको संस्थाहरू स्थानीय नगर परिषद र शहर को टाउको द्वारा प्रस्तुत छ (मेयर).
पोल्टावा युरोप को पूर्वी भाग मा स्थित छ, मा 301 कीव गर्न पूर्व किमि.
भौगोलिक निर्देशांक: 49° 00`35“एन 34 ° 00`33“ई, 140 पु माथि-समुद्र स्तर. शहर को Pridneprovskaya lowland मा स्थित र नदी Vorskla बैंक मा निहित छ. नदी गरेको फिडर को एक शहर भित्र Vorskla मा बग्छ भनेर Kolomak छ. साथै, पोल्टावा को precincts भित्र केही छैन त ठूलो प्राकृतिक ताल र कृत्रिम ponds एक प्रशस्त छन्. सिटी राहत, मुख्य रूप, पनि, तर को दूरी मा 1,5 नदी एक देखि मी धारिलो ढलान देख्न सक्नुहुन्छ (Vorskla दाहिने बैंक, जहाँ पोल्टावा स्थित छ - थप तीव्र, पहाडी उचाइ सम्म आउन 80-100 नदी स्तरमा अपेक्षाकृत हूँ). पोल्टावा को भौगोलिक स्थिति बरु लाभदायक छ र इतिहास को पाठ्यक्रम निकै शहर विकास प्रभावित. पोल्टावा धेरै महत्वपूर्ण परिवहन ट्रयाक मा खडा. हाम्रो शहर युक्रेन को सबै भन्दा ठूलो शहर बीच संचार सेवा प्रदान: कीव, Kharkov र Dnepropetrovsk.
सामान्यतया हाम्रो शहर जलवायु समशीतोष्ण छ, खुर्सानी जाडो र न्यानो साथ कन्टिनेन्टल (कहिलेकाहीं गर्म र बेहवा गर्मी). दीर्घकालीन अवलोकन अनुसार जनवरी मा औसत तापमान छ 6.8 तल शून्य डिग्री centigrade. गर्मी न्यानो र सुख्खा छ. सबै भन्दा महिना जुलाई छ, नियम अनुसार. जुलाई मा औसत तापमान छ 20.9 शून्य माथि डिग्री centigrade. पछिल्लो समयमा 100 - 200 वर्ष पोल्टावा मा तापमान, साथै सम्पूर्ण विश्व मा रूपमा, वृद्धि गर्न झुकाव छ. अल समयमा यो समय औसत वार्षिक तापमान लगभग मा वृद्धि 1,5 ° C. यो न्यानो वर्ष, दीर्घकालीन अवलोकन अनुसार, को वर्ष थियो 2010. तापमान को सबैभन्दा ठूलो वृद्धि पहिलो छ महिना मा भयो. पोल्टावा मा, औसत वार्षिक वर्षा छ 569 मिमी (फेब्रुअरी कम से कम - मार्च, सबै को सबै भन्दा - जुलाई मा). हरेक जाडो त्यहाँ एक हिउँ आवरण छ, जो अधिकतम उचाइ सामान्यतया फेब्रुअरी अवलोकन छ. औसत सापेक्षिक आर्द्रता छ 74%, मई मा कम से कम (61 %), डिसेम्बर मा सबै को सबै भन्दा (88 %).
1-सेन्ट मा राज्य तथ्याङ्क अनुसार, जनवरी 2010, शहरको जनसंख्या थियो 300,5हजार मान्छे. यो सम्म कम थियो 14 हजार मान्छे को वर्ष तुलनामा 1989 - र यो त खराब सूचक हो, खातामा युक्रेन मा डेमोग्राफिक अवस्था लिइरहेको (जस्तै, लवव को जनसंख्या सम्म कम 57 हजार मान्छे समय को यो अवधि लागि). पोल्टावा जनसंख्या घनत्व बढी छ 3000 प्रति km². 87% शहर जनसंख्याको यूक्रेनियन हो; 44, 0% को जनसंख्या मेहनत काम औद्योगिक क्षेत्र मा संलग्न छन्; 16, 0% - सेवा क्षेत्र मा; 6, 0% - विज्ञान मा, कला र शिक्षा.
पोल्टावा युक्रेन को एक ठूलो परिवहन उत्तर-पूर्वी nodal विन्दु हो. हाम्रो शहर ठाउँ छ, जहाँ महत्त्वपूर्ण रेलवे ट्रयाक र राजमार्गहरू intersected छन्. त्यहाँ एउटा ठूलो र विकसित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क छ. पोल्टावा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्गो यातायात केन्द्र हो. यो युरोप को पश्चिमी र पूर्वी भागमा एकतामा बाँध्ने राजमार्ग पार मा निहित. पोल्टावा कीव संग जोडिएको छ, Kharkov, Dnepropetrovsk, कारण राजमार्गहरू गर्न सुमी र Kremenchug.
त्यहाँ पोल्टावा मार्फत जाने यस्तो कार routs छन्:
ई 40 - कीव-Kharkov राजमार्ग (पूर्वी दिशा - Chutovo, Kharkov; पश्चिमी दिशा - Horol, Lubny, कीव);
एच-12 - राष्ट्रिय कार सडक (Kotelva, Ahtirka, सुमी);
एम-22 - अन्तर्राष्ट्रिय कार सडक (Kremenchug).
यात्री परिवहन लागि यस्तो सार्वजनिक conveyances प्रयोग गरिन्छ: विद्युत - ट्रोले-बसें; मोटर परिवहन - बसें, minibuses, यात्री ट्याक्सी. त्यहाँ Velikotyrnovskaya सडक मा एक बस स्टेशन हो, कीव-Kharkov राजमार्ग छेउमा (E40) जहाँ एक युक्रेन र युरोप भर यात्रा गर्न सक्छन्. साथै, त्यहाँ Shevchenko र Zenkovskaya सडकमा जिल्ला बस स्टेशन हो. साथै, त्यहाँ शहरमा दुई रेलवे स्टेशन हो (Kyivska र Pivdenna स्टेशनहरु). रेलवे ट्रयाक कीव संग पोल्टावा एकजुट, Kharkov, Kremenchug, Lozovaya र Krasnograd. कीव-Kharkov मार्ग Electrified र छिटो र सहज गाडिहरु को तरिका प्रदान गरिएको छ. रेलवे लाइन पोल्टावा को विद्युतिकरण - Kharkov अगस्ट मा समाप्त भएको थियो 2008.
त्यहाँ छन् 12 हाम्रो शहर को क्षेत्र मा उच्च शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट. उनीहरु: युक्रेनी चिकित्सा stomatological एकेडेमी, पोल्टावा राज्य Agrarian एकेडेमी, पोल्टावा राष्ट्रीय प्राविधिक विश्वविद्यालय Kondratyuk पछि नाम, पोल्टावा राष्ट्रीय शैक्षणिक विश्वविद्यालय Korolenko पछि नाम, पोल्टावा विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र र व्यापार को, पोल्टावा विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र र कानून को; पनि यस्तो संकाय छन्: युक्रेनमा व्यवस्थाको राष्ट्रिय एकेडेमी वाई पछि नाम. Mudryi, भित्री मन्त्रालय विश्वविद्यालय, कार्मिक व्यवस्थापन को Interregional एकेडेमी, अन्तर्राष्ट्रिय युरोपेली विश्वविद्यालय, कीव राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संस्कृति र कला को, राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी Universityof युक्रेन "खार्किव Polytechnicak संस्थान", पोल्टावा व्यापार संस्थान, को शिक्षाविद् Yuriy Bugay अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक र प्राविधिक विश्वविद्यालय. हाम्रो शहरमा छन् 52 सामान्य शिक्षा प्रतिष्ठानबाट र 54 पूर्वप्राथमिक संस्थाहरू, जो बीच: 14 नयाँ प्रकारको संस्थाहरू (शहर विद्यालय र gymnasiums).2मानसिक लागि विशेष विद्यालय वा शारीरिक विकलांग बच्चाहरु. 1 साँझ स्कूल.5निजी शैक्षिक संस्थाहरू.
पोल्टावा अद्भुत प्राकृतिक स्रोतहरू छ, उपयुक्त आर्थिक र भौगोलिक स्थिति. यसको क्षेत्र मा धेरै उद्यम छन् किन छ, इन्धन मा विशेषज्ञता, खाना, प्रकाश र काठको काम उद्योग. पोल्टावा ठूलो धातु बाट छैन टाढा स्थित छ, मिसिन निर्माण र कीव रूपमा वैज्ञानिक केन्द्र, Kharkov, मिसिन निर्माण र रासायनिक उद्योग विकास इष्ट कि Dnepropetrovsk. हाम्रो शहर दिन्छ 1/4 औद्योगिक क्षेत्र उत्पादन को.